थप २ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या ३ हजार ४ सय ४८ पुग्यो | पहिलो बोली
थप २ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण, कुल संख्या ३ हजार ४ सय ४८ पुग्यो
२५ जेठ, काठमाडौं–
आइतबार नेपालमा थप २ सय १३ जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण भएको पुष्टि भएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको नियमित पत्रकार सम्मेलनमा प्रवक्ता डा. विकास देवकोटाका अनुसार पछिल्लो २४ घण्टामा देशका विभिन्न् अस्पतालमा गरिएको परिक्षणमा थप २ सय १३ जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको हो ।
संक्रमितमध्येमा २०९ जना पुरुष र ४ जना महिला रहेको प्रव्क्ता डा. विकास देवकोटाले बताए । त्यस्तै, थप संक्रमितसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि हुनेको संख्या कुल ३ हजार ४ सय ४८ पुगेको छ ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रव्क्ता देवकोटाका अनुसार नेपालमा हालसम्म ४६७ जना उपचारपछि निको भएका छन् । निको हुनेमा पछिल्लो २४ घण्टामा नै १०२ जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका हुन्। त्यस्तै, हालसम्म कोरोना भाइरसको संक्रमणका कारण मृत्यु हुनेको संख्या १३ पुगेको छ ।